Group B ee Koobka Adduunka waxaa ku badan GADUUDKA sidaa darted xulka Spain ayaa ku qasbanaan doona inuu… – Gool FM
Group B ee Koobka Adduunka waxaa ku badan GADUUDKA sidaa darted xulka Spain ayaa ku qasbanaan doona inuu…
(Russia) 14 Juunyo 2018. Waxaa ugu dambeyn caawa Fiidkii Ruushka ka furmi doona tartankii la wada sugayay ee Koobka Aduunka.
Group-ka B oo ciyaaraya berito ayaa waxaa ku badan maaliyadaha Guduudan taa oo ku qasbi doonta xulka Spain in kulanka koowaad iyo midka saddexaad uu xirto maaliyadiisa kulamada bannaanka.
Kulankooda Furitaanka ay ku wajahayaan Purtugal waxay xiran doonaan maaliyadooda Buluuga khafiifka sidoo kalena isla maaaliyadaa ayay xiran doonaan kulankooda ugu dambeeya wareega Group yada ay ku wajahayaan Morocco.
Kaliya kulanka dhexe ay la ciyaarayaan Iran ayay ku ciyaari doonaan maaliyadooda soo jireenka ee Gaduudan.
Maaliyada Baluuga khafiifka ee leh Buumaha caddaanka ah ayuu Spain horey u xirtay markii uu 6-1 uga adkaaday Argentina ciyaar ka dhacday Madrid bishii March. Sidaa darteed waxay rajeynayaan inay u keeni doonto mid la mi ah farxadaas marka ay xirtaan kulanka ay ku wajahayaan Burtuqiiska.
Tababaraha Cusub ee Arsenal oo KAR KAR ku bilaabanaya Premier League xilli ciyaareedka cusub...(Arag kulamada la isku daba dhiga)